မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: အချိုပွဲ အတွက် ၂ရက်ပဲ အချိန်ပေးပါ..
အရင်က Yishun က မြန်မာ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်အကြောင်းတင်တုန်းက အမည်မသိ စာဖတ်သူတစ်ယောက်က ဟောဒီလိုမေးခဲ့ပါတယ်..
ကျမကလဲ သတင်းကြားရင် ပြောပါ့မယ်လို့ ဖြေခဲ့ပါတယ်... ဒါပေမဲ့.. ကျမကိုယ်တိုင်လဲ မသိခဲ့ပါဘူး..
နောက် ကျတော့.. သူက...
ကျမ တကယ်ကို ပြောပြချင်ပါတယ်.. ကျမကိုယ်တိုင်မသိလို့ ပြောပြလို့ မရဖြစ်နေတာပါ... ခုတော့ ရွှေရွန်းဒေါ့ကွန်းမှာ ကျမ အခန်းငှားဖို့ ကြော်ငြာတင်ရင်း အောက်ပါ ကြော်ငြာလေးကို သွားတွေ့လို့ ထို အမည်မသိ မိတ်ဆွေ အသုံးဝင်လို ၀င်ညား တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Title: Myanmar Dessert available
Contact no.: 98803577/ 67290034
Description: Pls contact two days advance,if you are busy to make dessert for your occasions/events.(Shwe Chi Hsanwin Makin, Banana, Potato Hsanwin Makin, Putin, Jelley....)
ဟိုတစ်လောက အရင်အလုပ်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးမှာလဲ ဒန်ပေါက်နဲ့ ချဉ်ပေါင်ဟင်းချို အချိုပွဲက ဆနွင်းမကင်းကို Clementi က မြန်မာဆိုင်က မှာတယ်လို့ပြောပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အသေးစိတ်ကို မေးခဲ့ဖို့ အဆင်မပြေတာနဲ့ မသိခဲ့ပါဘူး.. စားလို့ကောင်းပါတယ်..
ဒန်ပေါက်အတွက် နောက်ကြော်ငြာလေးတွေ့ပါတယ်.. ဒီမှာပါ..
Hi All Shwe Myanmar in Singapore,
We are famous "HMWE's Premium Dan Paut" in Singapore. Our Dan Paut is very well accepted by Shwe Myanmar community due to its good taste, nice aroma, less oily and suitable for all age groups. We accept small and large order everyday. Please feel free to call us anytime for inquiry.
Thanks to all existing customers and welcome all new customers.
All enquiry are welcome!
Ma Hmwe ( 94571775 )
Posted by mabaydar at 4:52 PM
4/04/2009 6:43 PM
စိတ်လိုလက်ရ မြန်မာစာလေး စားချင်ရင် စားကောင်းမှန်းတော့သိ၏
ဈေးလည်း ကောင်းတယ် ထင်၏၊။
4/05/2009 9:25 AM
ရှမ်းဆိုင်တော့ နှစ်ခါရှိပြီ သွားစားတာ။ ခုနေတဲ့ အိမ်နဲ့နီးတယ်ပြောရမယ်။
မဗေဒါက up selling လဲရတယ်နော်
so quiet... cheer tom good friday... u can rest already...